Ny endrika mitsiky dia tsara ho an'ny Canada Jetlines | Famoronana an-tserasera
Amazon dia mpanjaka mitsiky miaraka amin'ny sary famantarana mandrakizay izay tonga ao an-tsaintsika voalohany mba hahafahantsika miantra amin'ny marika. Zavatra mitranga amin'ny logo vaovao Jetlines izay misy "atody Paska" na atody paska miafina.
Hita mazava izany, fa havelanay kosa ianao hanindry ny lahatsoratra hahitanao azy etsy ambany. Noho io antony io dia miverina amin'ny an'ny raha afaka mametaka tsiky amin'ny anao ianao fiainana Logo, satria areti-mifindra tokoa ilay tsiky ka mitarika ny mpanjifa hiala sasatra ary hitondra anao amin'ny fomba hafa.
Kanada Jetlines dia niara-niasa tamin'i Cossette hamoronana marika vaovao ary misy fango vaovao manafina tsy ampoizina. Azo antoka fa efa nianjera tao ianao ary afaka mahita ilay endrika mitsiky izay niforona noho ireo teboka roa tamin'ny motera sy ilay fiolahana.
Amin'ny inona no azon'ny orinasa atao voalohany andao ho fantatra ny momba ilay marika ary, faharoa, takatsika fa eo ilay tsikitsiky mba hisambotra antsika amin'ny fomba ratsy. Ary na io fomba fahazoana ny sary famantarana io aza dia miaraka amin'ny tanjon'ny orinasa hanome ny vola farany ambany indrindra alefa any Canada.
Ny ataon'ny sary dia manamafy ny endrika hafanam-po fa azo tezitra amin'ny mpanjifa izany rehefa mandeha mandoa ny faktiora izy ary fantaro fa mora kokoa noho ny nieritreretanao azy. Io hevitra io koa dia manohana an'i Amazon sy ilay sary famantarana izay ohatra faran'izay lehibe tokony horaisina amin'ny hafa ary noho izany dia miteraka tsiky sy fitiavana an'ireo mpanjifa ho avy.
Navotsotra mihitsy aza izy ireo horonan-tsary hanehoana ny mombamomba ny marika vaovao ary ahoana ny tsiky afaka manamarika ny halavirana ary mampiakatra ny mpanjifanay ho amin'ny lanitra amin'ny hafanam-ponay. Aza adino ity publication nampianarina azy ity inona no ho fahitan'ny kilasin'ny sary hosodoko amin'ny tsiky tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Isaky ny afaka mametraka tsiky amin'ny sary famantarana ianao
Rehefa mampiasa ny sakafonao ho akora ilaina amin'ny asan'ny zavakantoo ianao
Ny foto-kevitra iray avy amin'ny sary famantarana marika kiraro Crocs dia manome azy "fijery" vaovao mamelombelona